विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ बर्ष पूरा, द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाएनन् - नेपालबहस
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ बर्ष पूरा, द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाएनन्
५ मंसिर २०७७ | ७:४२:५४ मा प्रकाशित
५ मंसिर, काठमाडौं । १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न भएको विस्तृत १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १४ बर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते आजकै दिन तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत एक दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेका थिए ।
विसं २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभार थिए– संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण । कोइरालाको निधनसँगै विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको धेरैको धारणा छ ।
शान्ति सम्झौताले निर्धारणा गरेका लक्ष्यमध्ये पाँच वर्ष अगाडि संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण भईसकेको छ । त्यसैगरी ८ वर्ष पहिला नै माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि ‘अयोग्य’ भनी बर्हिगमनमा परेका केही लडाकुले आफूहरुलाई अन्याय भएको र राहत नपाएको बताइरहेका छन् ।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १४ वर्षपछि पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति पीडितमा हुन सकेको छैन् । १० वर्षे द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन भएपनि त्यसले पूर्णता भने पाएन । मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरेपनि दोषीलाई कारवाही गर्न सकेन भने बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण आयोग अहिले पनि अन्यौलमै छन् ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ९ वर्षपछि मात्र सन् २०१५ मा एउटै ऐन मार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । तर दुवै आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेनन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ बर्ष पूरा हुँदा नेपालमा पहिलेकै जस्तो समाज पुरातनवादी भएको छ भने परिवर्तनकारी पक्ष भनेको तत्कालिन माओवादी अहिले विभाजित भएर अस्तित्व नै सिध्याउन अभ्यस्त छ । त्यसमाथि परिवर्तनकारी पक्ष अहिले सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट बनेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका हिंसापीडित महिला भन्छन्– हामीले कहिले न्याय पाउने ? ४ हप्ता पहिले
तनहुँबाट लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ ३ घण्टा पहिले
गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाईकै पहलमा ३ घण्टा पहिले
कार्यालय परिसरमै गोलभेडा खेती ४ घण्टा पहिले
राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन ८ घण्टा पहिले
टोखाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकाे एक लाखको बीमा १० घण्टा पहिले
जबरजस्ती करणी गर्ने यादव पक्राउ ७ घण्टा पहिले
एक वर्षपछि गलेश्वरको सडक र पुलका ठेकेदार काममा फर्किए १६ घण्टा पहिले
प्रिमियर लिगमा लिभरपूलले लेष्टर हरायो १८ घण्टा पहिले
संसदीय समितिका निर्देशन : कस्तो छ कार्यान्वयनको अवस्था ? १७ घण्टा पहिले
बादी बस्तीका अधिकांश बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित ८ घण्टा पहिले
प्रमोद खरेलको यो माया के हो ? १ दिन पहिले
३० मिनेटमा कोरोनाको रिपोर्ट आउने प्रविधिलाई अमेरिकाले दियो अनुमति ५ दिन पहिले
राष्ट्रपति ट्रपको घोषणाविरुद्ध उभियाे नेटो ५ दिन पहिले
पचास शय्याको अस्पतालमा एम्बुलेन्स नहुँदा बिरामी बोक्न स्ट्रेचर र डोको १८ घण्टा पहिले
कमेडीमा कमाल गर्दै गोलमाल, नेपाल टेलिभिजनका हाँस्य शृखलामध्ये अग्रस्थानमा २ दिन पहिले
माता उतार्ने नाममा बलात्कार गर्ने वनझाँक्री पक्राउ ४ हप्ता पहिले
कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाद्वारा समवेदना व्यक्त २ हप्ता पहिले
छटपटीमा ओली ५ दिन पहिले
फूलमा भविष्य खोज्दै भण्डारी दम्पत्ती २ हप्ता पहिले
आज कुकुर तिहार, लक्ष्मी पूजा पनि गरिदै १ हप्ता पहिले
चन्द्रमाको अँध्यारो तथा चिसो क्षेत्रमा बरफ पाइएको नासाको दाबी ४ हप्ता पहिले
यस वर्ष कास्कीमा कैदीबन्दीले टीका लगाएनन् ४ हप्ता पहिले
सुचना संकलन तथा विश्लेषण शाखा ‘टिकटक अभिनय’ गर्ने थलो बन्दै ३ हप्ता पहिले
बकरिद पर्व भोली १ वर्ष पहिले
वालिङबासीलाई गरिमा बैंककाे फिल्टर सहयाेग १ वर्ष पहिले
आरडिटी पोजिटिभ : स्वाब परीक्षण नेगेटिभ ७ महिना पहिले
एक हप्तामा भारतमा संक्रमितको संख्या दोब्बर ८ महिना पहिले